Xidigii hore ee NFL Ricky Williams Sida Isticmaalka Xashiishadu u beddeshay fikirkiisa • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Xidigii hore ee NFL Ricky Williams sida isticmaalka xashiishadda ay u beddeshay maskaxdiisa
albaabka Ties Inc. 16 May 2022
maqaal by Ties Inc. 16 May 2022
Ricky Williams wuxuu ku orday in ka badan 1.000 yard sanadkiiba Miami Dolphins iyo New Orleans Saints shan xilli oo xirfadiisa ah. Laakiin NFL ayaa sidoo kale hakisay Williams dhowr jeer si ay u tijaabiso in marijuana laga helay.
1 Faa'iidooyinka isticmaalka xashiishadda
2 Aragtida kala duwan ee xashiishadda
3 Summada xashiishka ee u gaarka ah
Inkastoo ganaaxaasi uu dhaawacayo sumcadda Williams ee kubbadda cagta Mareykanka, wuxuu noqday u doodaha caanka ah ee isticmaalka xashiishadda si loo daweeyo xanuunka iyo welwelka bulshada.
Faa'iidooyinka isticmaalka xashiishadda
44-jirkii hore ee All-Pro dib u ordayay ayaa u sheegay Fox News Digital wareysi uu dhawaan bixiyay inuu bilaabay inuu arko faa'iidooyinka marijuana 2002-dii. "Waxaan u maleynayaa inaan ogaaday ka dib markii aan ku guuldareystay baaritaanka daroogada 2002 iyo NFL ayaa yiri, 'Hagaag, hadda waa in lagaa baaro daroogada 10 jeer bishii,' ayuu dib u xusuustaa.
“Dabcan waan joojiyay sigaar cabista haramaha markaas. Taasi waxay yeelatay saamayn degdeg ah. Waxa aan ogaaday in aan qaatay dawooyin xanuun baabiiye ah oo aad u welwelsan. Markaa waxa aan bilaabay in aan sigaar cabbo in yar si aan u eego bal in uu farqi jiro. Waxay ahayd hubaal. Farqi weyn ayaa u dhexeeya: dhaqso ayaan u soo kabtay, arrimuhu aad bay ii dhibayeen taasna waxay ka muuqatay waxqabadkeyga."
"Waxaan qaatay xanuun baabi'iye badan sababtoo ah waxaan aad uga warqabay xanuunka i haya. Sannadkii 2002, gaar ahaan meel ka baxsan California, qofna kama hadlin marijuana caafimaad. Gaar ahaan NFL-ka waxaa la yiri, "Ha sameynin, sababtoo ah waa daroogo dhibaato kuu keeni doonta." Waxaan bilaabay isticmaalka xashiishadda sababtoo ah kuwa kale oo kooxdayda ah ayaa isticmaalayay. Markaa waxay ahayd cadaadis badan oo asxaabta oo doonaya inay la qabsadaan.”
Aragtida kala duwan ee xashiishadda
Williams: "Weli wax badan ayay i siisay. Ma ahan waxa ay dadku ka dhahaan sababtoo ah marka aan cannabis baabba'ay, anigu ma aan fadhiyey sariirta. caajis ma ahayn Waan akhriyay oo dib u milicsaday oo naftayda ka shaqeeyay. Markii aan ka fariistay NFL 2004tii oo aan xor ka ahaa xannibaadahaas, waxaan bilaabay inaan safro oo aan la sheekaysto kuwa kale.
Waxaan sii waday inaan sii dhex galo xashiishka. Waxaa ii caddaatay in xashiishka loo isticmaali jiray daawada qarniyo badan. Waxay ahayd tan iyo 1937 oo kaliya in loo tixgeliyey wax xun. Waxay ahayd xoogaa jahawareer sababtoo ah waxaa la igu ganaaxay isticmaalka ciyaarahayga. Cannabis ayaa maskaxdaada furaysa. Waxay iga dhigtay inaan fekero, "Williams ayaa u sheegay Fox News Digital. “Runtii waxay beddeshay aragtideyda. Halkii aan dareemi lahaa dhibbanaha, waxaan ogaaday in tani ay fursad weyn ii tahay."
Williams wuxuu sheegay in isticmaalka xashiishadda ay ka caawisay inuu dib u fikiro oo uu wax ka qabto arrimahiisa walaaca. "Haddii qof uu qabo walaac bulsho ama dhibaato kale oo caafimaadka dhimirka ah, daaweynta caadiga ah waa laba qaybood. Caadiyan waa nooc ka mid ah daawaynta hadalka ama daaweynta dabeecadda garashada oo badanaa dadku waxay mari doonaan dariiqa dawooyinka. Fikradda ayaa ah in wax gudaha lagu xalliyo oo qofka dhibaato u keenaya,” ayuu yidhi.
"Aniga ahaan, xashiishadda ayaa i caawisay. Waxaa si cad u jira qayb kiimiko ah. Taasi waa sababta aan ugu yeerno daroogo, laakiin waxaan u isticmaalaa waxa aan ugu yeero daaweynta nafsiga ah. Tababarka ka dib, markii aan guriga tagay oo aan sigaar cabbay, waxaan milicsaday maalintayda si aan si fiican u fahmo naftayda. Sababtoo ah dabeecadda waxa ay xashiishadu qabato ayaa ina gelinaysa in badan oo aan la xiriirno sida aan dareemeyno. Dad badan ayaa la baray in aysan la xiriirin dareenka. Waxaa hubaal ah in ciyaarahan ay caadi tahay in dareenka dhinac la iska dhigo oo shaqada la qabto.
“Waxay u shaqaynaysay dadka qaar, laakiin aniga ima ay shaqayn. Cannabis ayaa ii ogolaatay inaan si badan ula xiriiro sida aan dareemayo. Taasi waxay iga dhigtay welwelkii iga yaraa. Halkii aan dhibaatada qarin lahaa, xashiishadda ayaa iga caawisay in aan ogaado sababta.
Summada xashiishka ee u gaarka ah
Williams wuxuu bilaabay astaanta qaab nololeedka xashiishadda Highsman Oktoobar 2021 wuxuuna sii daayay saddex nooc oo ubax ah oo hoos yimaada sumaddiisa: Pregame, sativa; Nus-daqiiqo, isku-dhafan; iyo Postgame, oo ah tilmaame. Waxa kale oo uu la midoobay Jeeter si uu u soo saaro resin pre-roll iyo vape set oo loo yaqaan "Sticky Ricky".
Dhammaan dakhliga ka soo baxa iskaashiga Highsman iyo Jeeter waxaa lagu deeqi doonaa Athletes for CARE, oo ah hay'ad caafimaadka dhimirka ah oo ay aasaaseen ciyaartoydii hore ee xirfadleyda ah si ay wax uga qabtaan welwelka caafimaad ee waaweyn, hadday ahaan lahaayeen maskax, jir ama dhaqaale.
Xigasho: foxnews.com (EN)
Ku jabsiga Warshada Xashiishada ee loo maro Blockchain…
Gabadha Marijuana Charlotte Figi waxay ka dhimatay Corona
iCAN waxay ku dhistaa deegaanka xashiishadda cannabis ee caalamiga ah...